Yakazara Scissor Simudza Tafura Vagadziri & Vatengesi | China Standard Scissor Simudza Tafura Fekitori
Isu takawedzera chikuva chinotenderera kune yakajairwa yakagadziriswa scissor chikuva kuti iite yakakodzera kune yegungano mutsara webasa nemamwe maindasitiri anoenderana. Ehezve, mukuwedzera kune izvi, isu tinogamuchira akagadziridzwa mahwendefa uye saizi.
Tafura yakapetwa chigero inokodzera basa kunzvimbo dzinoshanda dzisingakwanise kusvikwa netafura imwe yekukwirisa chigero, uye inogona kuiswa mugomba, kuitira kuti chigero chekusimudza tafura chigone kuchengetwa zvakaenzana nepasi uye chisazove chipingaidzo pasi nekuda kwehurefu hwayo.
Tafura ina yekukwirisa chigero inonyanya kushandiswa kutakura zvinhu kubva kuburiro rekutanga kuenda kuimba yepiri. Chikonzero Vamwe vatengi vane nzvimbo shoma uye hapana nzvimbo yakakwana yekuisa erevheta yekusimudza kana kusimudza zvinhu. Iwe unogona kusarudza mana scissor simudza tafura panzvimbo yetafiti yekusimudza.
Iyo yekushanda kukwirira kwetatu scissor simudza tafura iri pamusoro pane iyo yekaviri scissor simudza tafura. Inogona kusvika pakakwirira chikuva che 3000mm uye iwo unorema mutoro unogona kusvika 2000kg, izvo pasina mubvunzo zvinoita kuti zvimwe zvinhu zvekubata zviite basa riwedzere uye nyore.
Iyo yakagadziriswa scissor simudza tafura inoshandiswa zvakanyanya mukuchengetera mashandiro, magungano mitsara uye mamwe maindasitiri mafomu. Kukura kwepuratifomu, kurema kwemutoro, kukwirira kwepuratifomu, nezvimwe zvinogona kugadzirwa. Zvingakudetsera zvishongedzo senge remote control handles zvinogona kupihwa.